२३ देशका झण्डै एक सय भन्दा बढी सैन्य-गुप्तचरहरु किन आए काठमाडौँ ? — Motivatenews.Com
२३ देशका झण्डै एक सय भन्दा बढी सैन्य-गुप्तचरहरु किन आए काठमाडौँ ?
भदौ १८, काठमाडौं –विभिन्न २३ देशका झण्डै एक सय भन्दा बढी सैनिक गुप्तचर अधिकारीहरु काठमाडौँको बौद्धस्थित होटल हायातमा भेला भएका छन्। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्ड गुप्तचर निर्देशनालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सम्मेलनका लागि उनीहरु काठमाडौँमा भेला भएका हुन्।
दर्जन कम्पनीको शेयर मुल्यमा उछाल, कुन कम्पनीको शेयर मुल्य कति बढ्यो ?
चुनावले झन् ठूलो दुर्घटना ल्याउनेछ : बाबुराम